कर बढाएर जनतालाई पीडा दिइयो भने मेयर लालकिशोर साहलाई चयनले बस्न दिन्नौँः जीवनाथ चौधरी युवा नेता नेपाली कांग्रेस – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित / कर बढाएर जनतालाई पीडा दिइयो भने मेयर लालकिशोर साहलाई चयनले बस्न दिन्नौँः जीवनाथ चौधरी युवा नेता नेपाली कांग्रेस
Sujeet Jha August 28, 2018	बातचित 2,912 Views
प्र. जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई तपाईले थर्काएको भिडियो भाइरल भईरहेको छ नि ?
हामी थर्काउन होइन जनताको समस्यालाई लिएर मेयर लालकिशोर साहलाई भेट्न गएको थिएँ । तर उहाँले जनताको समस्या सुन्नु भन्दा कांग्रेसले यतिका वर्ष शासन गर्दा आफूहरु कहिल्यै नगएको तर ९ महिनामा तीन पटक कांग्रेस डेलिगेशन लिएर आएको भन्न थालेपछि हामीले वस्तुस्थतिसंग जानकारी गराएका छौँ । कांग्रेसले शासन गर्दा तपाईहरु आउनु भएन यसको अर्थ तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउनु हुन्न ।
प्र. नेपाली कांग्रेसको माँगहरु के के रहेका छन् ?
हरेक कुरोमा कर बढाइएको छ । जहाँ खपडाको घरमा ५० रुपैया सम्पति कर लाग्थ्यो अहिले ९ सय रुपैया लागि रहेको छ । जहाँ ३० हजार लाग्थ्यो त्यहाँ ९० हजार लागि रहेको छ । पार्किंग शुल्क पनि लगाइएको छ । साइकलको ५ रुपैया, मोटर साइकलको १० रुपैया, कार जीपको २० रुपैया, भारतीय नम्बर प्लेट भएको गाडीको ५० रुपैया । जहाँबाट पनि पैसा उठाउने मेयरले जुक्ति निकालि रहेका छन् । आफू डेढ करोडको गाडीमा चढ्न जनतालाई परेशान गरिरहेका छन् । भारतीय गाडीलाई बढी पैसा लिएर पर्यटकको मनोबल घटाउने कार्य गर्ने मेयरलाई हामी त्यतीकै छोड्दिनौँ ।
कांग्रेसका वडाध्यक्षहरु मेयरलाई समर्थन गरेको हामीले पनि सुनेका थियौँ । वडाध्यक्षलाई बोलाएर पार्टीले कुरा गरेको छ । अब त्यस्तो स्थिति रहँदैन । एक साता पहिला मात्रै ५, ९ र २३ नम्बर वडाका वडाध्यक्षहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मेयर बिरुद्ध बोलेको खबरहरु तपाईहरु सुन्नु भएकै होला । मेयर साहको गलत कार्यको नेपाली कांग्रेसले कुनै हालतमा समर्थन गर्दैन ।
प्र. एकातिर तपाईहरु आन्दोलनको कुरा गर्नु भएको छ अर्को तर्फ तपाईकै पार्टीबाट जितेका वडाध्यक्षहरु मेयरको दास जस्तै कार्य गरिरहेका छन् ?
मेयरलाई समर्थन गरेको हामीले पनि सुनेका थियौँ । वडाध्यक्षलाई बोलाएर पार्टीले कुरा गरेको छ । अब त्यस्तो स्थिति रहँदैन । एक साता पहिला मात्रै ५, ९ र २३ नम्बर वडाका वडाध्यक्षहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मेयर बिरुद्ध बोलेको खबरहरु तपाईहरु सुन्नु भएकै होला । मेयर साहको गलत कार्यको नेपाली कांग्रेसले कुनै हालतमा समर्थन गर्दैन ।
प्र. तपाईहरुले दूई दिने आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको छ ?
हो । १४ गते प्रत्येक वडामा २ घण्टा धर्ना, १५ गते दिनभरी धर्ना । त्यसले पनि जनताको पीडालाई सम्बोधन गरिएन भने नगरपालिका घेराउ गर्छु ।
यो मेयरले बोर्ड सदस्यहरुको पनि कुरो सुन्दैनन् । कांग्रेसका वडाध्यक्षलाई पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको छ । फोरम, नेकपा तिनीहरुको सुन्दैनन् । केही नजिकका व्यक्ति बाहेक राजपाका वडाध्यक्षको पनि कुरो सुन्दैनन् । केही वडाध्यक्षको वक्तव्यहरु सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छ । मेयर साहको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका कुराहरु पनि आई सकेका छन् । १०÷१५ लाखको बल्व लगाएका छन् भने ८५ लाख खर्च देखाइएको छ । बिना विज्ञापन निकाली आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई कर्मचारीमा भर्ना गराएका छन् ।
प्र. तपाईलाई लागिरहेको छ यो आन्दोलनले समस्या समाधान हुन्छ ?
समाधान गर्नै पर्छ । समाधान गरिएन भने चयनले मेयरलाई बस्न दिन्नौँ । आन्दोलन चलि रहन्छ । यो मेयरले बोर्ड सदस्यहरुको पनि कुरो सुन्दैनन् । कांग्रेसका वडाध्यक्षलाई पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको छ । फोरम, नेकपा तिनीहरुको सुन्दैनन् । केही नजिकका व्यक्ति बाहेक राजपाका वडाध्यक्षको पनि कुरो सुन्दैनन् । केही वडाध्यक्षको वक्तव्यहरु सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छ । मेयर साहको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका कुराहरु पनि आई सकेका छन् । १०÷१५ लाखको बल्व लगाएका छन् भने ८५ लाख खर्च देखाइएको छ । बिना विज्ञापन निकाली आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई कर्मचारीमा भर्ना गराएका छन् । यो मेयरको कार्यकालमा केही भएको छैन । विमलेन्द्र निधि भौतिक तथा योजना मन्त्री हुँदा लागेका टेण्डरहरुको सडक बनि रहेको छ, एडिबीको कार्यहरु भई रहेको छ ।
Tags जनकपुरधाम जीवनाथ चौधरी नेपाली कांग्रेस लालकिशोर साह
Previous प्रदेश २मा नयाँ गठबन्धनको संकेत मैले देखिरहेको छुः डा. सुरेन्द्र लाभ, राजनीतिक विश्लेषक
Next ७५ रुपैयामे बढियाँ शाकाहारी भोजन कराबएके लक्ष्यसंग काज आगा बढा रहल छीः ललित बजाज, नवनिर्वाचित अध्यक्ष मारवाडी सेवा समिति, जनकपुरधाम